Nanakatona Tranonkala Mamoafady Miisa 560 i Bangladesh · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 05 Janoary 2017 1:12 GMT
Vakio amin'ny teny Ελληνικά, English, Español, မြန်မာ, 한국어, English
Sary avy amin'i Geralt tao amin'ny Pixabay. Sary azon'ny rehetra ampiasaina.
Nanatontosa fanentanana iadiana amin'ireo votoaty antserasera azo saziana ny governemanta Bangladeshy tamin'ny alalan'ny fanakatonana tranonkala mamoafady miisa 560, izay ampiantranoana ao an-toerana ny ankamaroany. Nomena ireo mpamatsy tolotra aterineto, mpamatsy vavahady antserasera sy tolotra finday ny lisitr'ireo tranonkala ireo, izay tsy mbola tsy nampahafantarina ny fampitam-baovao.
Tany am-piandohan'ity taona ity,nilaza ny fikasany hanakana tranonkala vetaveta ny manam-pahefana Bangladeshita, ka nahatonga ireo fanehoan-kevitra hifamahofaho. Araka ny nambaran'i Tarana Halim, Minisitry ny Paositra sy ny Fifandraisandavitra, miteraka fiantraikany ratsy ara-tsosialy eo amin'ny olom-pirenena rehetra, anisan'izany ny tanora, ny fahafaha-miditra mora foana amin'ny votoaty manafintohina sy vetaveta.
Araka ny filazan'ny Komity Mpandrindra ny Fifandraisan-davitra ao Bangladesh, nitombo maherin'ny 62 tapitrisa (amin'ireo mponina eo ho eo amin'ny 160 tapitrisa ) ny isan'ny mpisera aterineto ao amin'ny firenena. Miditra aterineto amin'ny alalan'ny fitaovana finday ny dimy amby sivi-folo isan-jaton'ireo mpiserasera. Ary efa ho 30% ny tahirin'ny finday no voalaza fa ampiasaina hitsidihana tranonkala vetaveta. Nahita ny fanadihadiana vao haingana avy amin'ny Fikambanana Manusher Jonno, fikambanana tsy miankina fa efa ho 77 isan-jaton'ny mpianatra ao an-drenivohitra no mijery sary vetaveta amin'ny alalan'ny finday sy ny fitaovana hafa.
Tamin'ny Novambra 2016, nanangana komity misahana ny fanomezana tolo-kevitra hamerana ny fidirana amin'ny tranonkala vetaveta ny minisiteran'ny Paositra sy ny Fifandraisan-davitra. Hatramin'Izao, hita fa ny fanomezana soso-kevitra hanakana tranonkala tahaka izany no vahaolana voalohany arosony.
Nanolotra ny lisitr'ireo tranonkala vetaveta 560 nakatona vao haingana ny komity. Nitarika fanehoan-kevitra mifanipaka teo amin'ireo mpiserasera izany fanakatonana izany. Nanoratra tamin'ny lahatsoratra Facebook ilay bilaogera Arifur Rahman hoe:
Raha misy ankizivavy meloka ara-pivavahana sambany manao firaisana ara-nofo amin'ny ankizilahy mahalala ny ataony noho ny fijerena ireo fotsy hoditra kinga amin'ny fanaovan-javatra hafahafa sy tsy mifanaraka amin'ny zavamisy, miatrika fahadisoam-panantenana ilay ankizilahy ary simba amin'ny fangatahana tsy tena izy nataon'ilay ankizilahy ilay ankizivavy. Mankahala mandrakizay ny firaisana ara-nofo tsy mbola nizorany lalina ilay ankizivavy.
Tsy tsara ho an'ny rehetra ny vokany. Mila fananahana ara-pahasalamana isika, misy fifandraisana manan-danja amin'ny fahasalamana tsara izany.
B M Mainul Islam, Profesora Mpanampy ao amin'ny Ivom-pampianarana Teknolojiam-baovao, Oniversiten'i Dhaka nanoratra hoe:
Ny marina dia, na teraka tao amin'ny firenena na tany ivelany, tsy izany no olana. Raha tsy afaka manakana ireo tranonkala rehetra ianao, ireo izay mila mijery votoaty vetaveta notontosaina tany amin'ny [planeta] Marsa dia hahita izany. Tsy misy isalasalana fa olana ny vetaveta. Raha laharam-pahamehana izany ankehitriny – dia zavatra tsara dinihana. Noraisina ny fanapahan-kevitra, tsy mba nanana fahafahana namaky azy ireo tamin'ny antsipiriany aho, ka tsy afaka maneho hevitra. Na izany aza, azo antoka fa tsy nifototra amin'ny lahatahiry ireo fanapahan-kevitra ireo. Farafaharatsiny, toa avy amin'ny famakiana vaovao an-gazety izany.
Raha niandry ny tatitra avy amin'ny komity ny minisitera, niteraka fisafotofotoana sy nampizarazara ny olona tao Bangladesh ny fiteny diso nataon'ny minisitry ny Paositra sy ny Fifandraisan-davitra vao haingana. Novain'ny haino aman-jery ny filazan'ny Minisitry ny Fifandraisan-davitra, Tarana Halim, nolazainy fa nilaza izy hoe namorona rafitra mety hampiharihary ireo mpanjifa votoaty vetaveta ny manampahefana, rafitra heveriny fa hanakana ny olona tsy hiditra amin'ny tranonkala vetaveta, noho ny tahotra fa mety hiharihary [ho fanta-bahoaka] izy ireo.
Niteraka fisafotofotoana sy fanehoan-kevitra feno fahatezerana avy amin'ny olona ny vaovao. Tamin'ny 13 Desambra, namoaka fanambarana tao amin'ny Facebook, ny minisitra fa diso tamin'ny zavatra nolazainy ny vaovao:
Tsy nilaza velivety aho fa ho havoaka ny lisitr'ireo mpitsidika tranonkala vetaveta. Ara-teknika, tsy mety atao izany. Andraikitray ny miaro ny vaovao sy fanondroana manokana ny olona.
Ny sary vetaveta sy ny lalàna ao Bangladesh
Tamin'ny taona 2012, nankatò lalàna miady amin'ny sary vetaveta izay ahitana sazy an-tranomaizina hatramin'ny 10 taona sy onitra hatramin'ny dimy hetsy Taka nygovernemantan'i Bangladesh. Ny Lalàna Mifehy ny Sary Vetaveta dia mandràra ny “fitondrana, fanakalozana, fampiasana, fivarotana, fanaovana dokambarotra, fizarana, ftehirizana, fanaovana sarimihetsika” vetaveta ao Bangladesh.
Sarintany Manerantany misy ny Sata Ara-dalàna momba ny Votoaty Vetaveta. Sary tao amin'ny Wikipedia, azon'ny rehetra ampiasaina.
Hita fa nifantoka tamin'ny fandraràna tranonkala vetaveta ny fanjakana mba “hiarovana ny tanora sy ny vehivavy manoloana ny sary mamoafady”. Saingy maro ao Bangladesh no mihevitra fa miezaka mametraka fenitra amin'ny fitondra-tenan'ny vahoaka ny fanjakana. Tsy misy ihany koa ny antoka fa hampihena ny fanjifàna sary vetaveta ao amin'ny firenena ny fandraràna ireo tranonkala vetaveta sasany. Araka ny filazan'ny mpaneho hevitra iray, “mila mifantoka bebe kokoa amin'ny fanomezana fampianarana ny fananahana ho an'ny olom-pireneny ny governemanta fa tsy any amin'ny fihazana ireo tranonkala vetavetra.”